Izinsizakalo - A1 Financial Services
Singabantu abangochwepheshe kumshuwalense wokuphila kanye nesibopho somngcwabo. Udinga usizo?
COVID-19 NOTICE NATIONWIDE LOCKDOWN IN EFFECT FROM 26 MARCH 2020 Read More
i-A1 Financial Services Group ungumthengisi oqavile waseNingizimu Afrika wemikhiqizo yezezimali, umngcwabo, impilo kanye nomthetho. Imikhiqizo isatshalaliswa ngesikhungo sethu nemitapo yamanxusa ethu. Sisebenza ngokubambisana nabanikezeli bomshuwalense abaholayo kanye nama-agent ukuze banikeze abathengi ithuba elihlelekile, ngenkathi bebongela nemali.
Chofoza ukuze ubuke izinsizakalo ezahlukene
Ukuthatha umasingcwabisane wethu kunikeza umndeni wakho ukuthula kwengqondo ukuthi izindleko zingagcinwa futhi ngeke baphonseke ezikweletini ngesikhathi sokulila. Uma kuziwa kulokhu okubalulekile, kufanele uzizwe uqiniseka ukuthi usebenzisana nochwepheshe. Sisiza abantu ukuthola izinhlelo eziphezulu kakhulu zokungcwaba, ukuze siqinisekise ukuphepha kokuphela kwempilo yabo. Sifikile ukukhetha uhlelo lomngcwabo olulula ngangokunokwenzeka. Simelele inethiwekhi enkulu eNingizimu Afrika yamishwalense omngcwabo abazimele, ukukusiza uthole izinsizakalo ezingcono kakhulu zokungcwaba. Uma isikhathi sifika, umshwalense wakho wokungcwaba uzokhathalela konke. Banikeza ukusekela okubalulekile emndenini wakho, kusukela ekuhleleni umngcwabo kuye ekutheni babe khona ngalo usuku futhi baqinisekise ukuthi konke kuhamba ngendlela ofuna ngayo.
Ingabe ufuna nje umasingcwabisane wakho; umndeni wakho oseduze; noma udinga umasingcwabisane wabazali bakho, umfowenu, ugogo, umalume, ngisho nabazali bakho basemzini?
i-A1 Financial Services yenza ngokwengeziwe ukuze ikusize ukuhlinzeka ngokuvikelwa kwemali yonke yomndeni wakho — abantu empilweni yakho abathembele kakhulu kuwena. Umshwalense wokuphila ungasiza ukuletha ukuthula kwengqondo ukwazi ukuthi nokuhlala kahle komndeni wakho futhi ugcine amaphupho abo ephokophele phambili. Qhubeka unakekela abathandekayo bakho, ngisho nangemva kokuhamba kwakho. Nikeza izinzuzo zezezimali zokufaka isikweletu esikhwameni sesikweletu, izindleko zokungcwaba noma ezinye izindleko zokugcina.
Ungase uzizwe ukuthi ukuthenga umshwalense wokuphila kungaba yinqubo esabisayo futhi elethat imibuzo eminingi engqondweni. Ngidinga okuningi kangakanani? Uhlobo luni lomgomo olungile kimi? Ingabe ngidinga ezinye izinhlobo zokuhlanganisa?
i-A1 Financial Services ikunika ithuba lokuthola izinsizakalo zomthetho eziphakeme. Sihlangene nabahamba phambili, abanikeza izinsizakalo zomthetho eziphambili ezinsukwini zamanje. Cishe ngaphandle kokungabaza, bonke abantu bazobhekana nezinkinga zomthetho ngenkathi bephila. Umshwalense wezomthetho unikeza ubuso nobuso kanye nezeluleko zezomthetho zocingo kanye nokumelelwa kwezindaba zomthetho siqu.
Awusoze wazi ukuthi uzodinga nini iseluleko sezomthetho, amathuba ukuthi izindleko zizobe ziphezulu kakhulu. Qinisekisa ukuthi ukhaviwe nanoma ngeyiphi indlela ngomshwalense wezomthetho ongabizi.
Ukuxoshwa emsebenzini okungekho emthethweni kanye nokulalelwa kwamacala e-CCMA yezinyunyana zabasebenzi, ukusolwa ngobugebengu ngendlela engekho emthethweni, njengokweba emsebenzini, ukuhlaselwa emphakathini ngesikhathi sokungavumelani, idumela lakho elikulimaza emsebenzini ngoba othile usakaze amahemuhemu anomonakalo? Lezi zizathu ezithile nje ezidingayo umshwalense wezomthetho onecophela eliphezulu.
Ukuthola ikhava kulula! Thola inqubomgomo efanele emaminithini, Thola isaphulelo namhlanje!
Singochwepheshe futhi sizokhipha izingcaphuno ezincintisana kakhulu kuzo zonke izinhlobo ezihamba phambili.
UmasingcwabisaneLife InsuranceLegal Advice
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngolwazi oluhle kakhulu lwezimali nezebhizinisi abaludingayo ukuze bakhe, bathuthukisa futhi bagcine ingcebo.
i-A1 abadayisi abasemthethweni bokunikeza usizo ngezimali. Inombolo 47264 inombolo yokubhalisa 2016 / 00395 / FSP. POPI/PAIA
Isayithi ngabakwa PaperJetStudios